Air Canada na-ekwupụta ọkwa ụgbọ elu ọhụrụ nke Hawaii site na Montreal, Toronto, Calgary na Vancouver | Akụkọ ụgbọ elu
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Air Canada na-ekwupụta ọkwa ụgbọ elu ọhụrụ nke Hawaii site na Montreal, Toronto, Calgary na Vancouver
Air Canada kwuru “Aloha”Na Winter 2022 site na Montreal, Toronto, Calgary na Vancouver.
Ọrụ ọhụụ na-anaghị akwụsị akwụsị Montreal-Honolulu ga-ebido na Disemba 12, 2021
Ọrụ ọhụụ na-enweghị nkwụsị Toronto-Maui malitere na Disemba 18, 2021
Calgary ọhụụ na-akwụsịghị ọrụ Honolulu na ịmaliteghachi ọrụ Maui ga-ebido na Disemba 18, 2021
Air Canada ga-amalite ọtụtụ nhọrọ na-enweghị nkwụsị site na Canada ruo Hawaii n'oge oyi a, gụnyere ọrụ mbụ Montreal-Honolulu na Toronto-Maui. Flightsgbọ elu ndị a mejupụtara ọrụ ụgbọelu ahụ dị ogologo oge site na Calgary na Vancouver na agwaetiti Hawaii ma ga-eme ka njikọ ga-adaba adaba na Canada yana Europe.
“Anyị na-ahụ ihe ndị siri ike n’ahịa anyanwụ n’oge oyi a, anyị na ndị Canada na ụwa niile na-ele anya njem njem. Ka anyị na-emecha usoro anyị ịkwado Air CanadaNdị isi na njem ezumike n'oge oyi a, anyị agbakwunyela ụgbọ elu ọhụrụ na-enweghị nkwụsị na Hawaii site na Montreal na Toronto na mgbakwunye na ụgbọ elu anyị si Calgary na Vancouver, na-eme ka ọ dịkwuo mfe karịa mgbe ọ bụla ndị Canada gafee mba ahụ iji nweta Hawaiian Islands. Site na Europe, ndị ahịa ga-enwe ike jikọọ na ụgbọ elu Hawaii anyị site na ọnụ ụzọ Montreal na Toronto. Anyị maara na ndị mmadụ ga-enwe obi ụtọ ịga njem n'oge oyi a, anyị na-atụkwa anya ịnabata ndị ahịa anyị n'ụgbọ ahụ, "ka Mark Galardo, Onye isi oche Ndị Isi, Network Network na Revenue Management na Air Canada kwuru.
“Obi dị anyị ụtọ na Air Canada na-ebupụta nhọrọ ndị ọzọ iji gbaga Hawaii. Anyị na-atụ anya ịnabataghachi ndị enyi Canada. Anyị ga-achọ ịsị nnukwu mahalo na onye anyị tụkwasịrị obi Air Canada maka nkwado na-aga n'ihu na ịkekọrịta ya aloha mmụọ ma na-anabata uru bara uru nke mālama mgbe niile, "ka Lorenzo Campos, Onye Isi Nchịkwa Maka Hawaii Tourism Canada kwuru.
Ikuku Canadaflightsgbọ elu ọhụrụ nke Hawaii si Montreal na Toronto nwere nhọrọ nke ụlọ ọrụ atọ, gụnyere ahụmịhe njem njem ụgbọ elu na klaasị Air Canada nke Mbinye aka na-egosi ọkwa Pods dị larịị. A na-enwe oche maka ire ere ugbu a maka oge oyi ọzọ. Iwu nkwụghachi ụgwọ ọhụụ nke Air Canada nke ịnye ndị ahịa nhọrọ nke nkwụghachi ụgwọ, Air Canada Travel Voucher ma ọ bụ ọnụahịa bara uru na Aeroplan Points nwere ego 65% kwesịrị ka ụgbọ elu kagbuo ma ọ bụ dozie ụgbọ elu site na ihe karịrị awa atọ, dabara na tiketi niile azụrụ.
Nhazi nke Montreal na Honolulu:
Jikọọ na / site na Brussels, Frankfurt, intra-Quebec na Atlantic Canada
Fìhè Route Doge oge Oge mbata Aircraft Ofbọchị Ọrụ Amalite
AC521 Montreal (YUL) ruo
Honolulu (HNL) 13: 30 19: 54 Boeing 787 Dreamliner Wed, Anwụ Dec. 12, 2021
AC520 Honolulu (HNL) ka
Montreal (YUL) 21: 30 12:02 (+ ụbọchị 1) Boeing 787 Dreamliner Wed, Anwụ Dec. 12, 2021